ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် အရေးပေါ် အစည်းအဝေး၌ ခန့်အပ်ရန် သဘောတူထားသည့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီး သုံးဦး က? - Yangon Media Group
ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် အရေးပေါ် အစည်းအဝေး၌ ခန့်အပ်ရန် သဘောတူထားသည့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီး သုံးဦး က?
ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/ ၂ဝ၁၉)တွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များမှ သဘောတူထားသောပြည်နယ်ဝန်ကြီးသုံးဦး ကတိသစ္စာပြုကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုမှုကို ဇန်နဝါရီ၃၁ရက်နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ် တော်ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးစတုတ္ထ နေ့တွင် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းတင်က ပြည်နယ်လွှတ်တော်အ စည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခွင့်ရှိ သူ ၅၃ ဦးအနက်ခွင့်တိုင်ကြားသူ ခြောက်ဦးရှိသဖြင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ၏ ၈၆ ဒသမ ၇၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိသဖြင့် အစည်းအ ဝေးအထမြောက်ကြောင်းကြေညာသည်။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်း အဝေးတတိယနေ့တွင် ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ကတင်သွင်းထားသည့် လစ်လပ်လျက်ရှိသောပြည်နယ် ဝန်ကြီးနေရာများတွင် ခန့်အပ်တာ ဝန်ပေးရန်လွှတ်တော်က သဘော တူကြောင်းဆုံးဖြတ်ထားသည့် ဝန်ကြီးသုံးဦးတို့ကလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ရှေ့မှောက်၌ကတိသစ္စာပြုလက် မှတ်ရေးထိုးကာ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုကြသည်။
ယနေ့အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး အဖြစ် မိုးညှင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ကျော်ဝင်း၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ဖားကန့်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဒါရှီလဆိုင်း၊ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ဝိုင်းမော်မြို့ နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနော်လီတို့က လွှတ်တော်တွင်ကတိ သစ္စာပြုခြင်းဖြစ်ပြီး စည်ပင်သာ ယာရေးဝန်ကြီး ဦးနေဝင်းအားလှုမှု ရေးဝန်ကြီးအဖြစ် နိုင်ငံတော်သမ္မတ မှဇန်နဝါရီ ၃ဝရက်တွင်ပြောင်းလဲ တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးကို မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် အောင် မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အတည်ပြုကြေညာခဲ့ပြီး အစည်းအ ဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။